काठमाडौं २ असोज– काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको अंकोलोजि वार्डको ४४२ नम्बरको शैयामा मलिन अनुहारमा बसिरहेकी थिइन् काभ्रेकी रोशनी त्रिपाठी । उनकै छेउमा रहेकी उनकी आमा सिता त्रिपाठीको अनुहारमा बेचैनी थियो ।
रोशनीका आमाछोरी एक महिना अघिदेखि कान्ति बाल अस्पतालमा कष्टपूर्ण दिनहरु गुजार्दैछन छन् । सिताकी १४ वर्षकी छोरी रोशनी त्रिपाठीलाई रक्त क्यान्सर भएको छ ।
काभ्रेकै जनचेतना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्दै गरेकी रोशनीलाई दुई महिना अघि बारम्बार ज्वरो आउँने र खोकी लाग्ने समस्या देखिन थाल्यो । रोशनी विरामी परेपछि सुरुमा उनी आमाले नजिकैको मेडिकलबाट औषधि ल्याएर खुवाइन् । तर रोशनीलाई मेडिकलको औषधिले निको भएन । निको नभएपछि काभ्रेको एक अस्पतालमा भर्ना गराइन् । एक साता सम्म अस्पतालमा भर्ना गरेर एन्टिबाइटिक खाएपछि रोशनीको खोकी र ज्वरो कम हुदै गयो ।
अस्पातलले एक साता पछि घर लैजाने अनुमति दियो । तर घर लगेको भोलिपल्टबाट रोशनीलाई फेरी एक सय ३ डिग्रीको ज्वारो आयो । अस्पतालमा भर्ना भएर एक सातासम्म औषधि खादा पनि निको नभएपनि आफन्तहरुको सल्लाहमा सिताले छोरी रोशनीलाई महाराजगञ्जको बाल कान्ति अस्पतालमा ल्याइन् । बाल कान्ति अस्पतालले भर्ना गरेर रोशनीको उपचार सुरु ग-यो । कान्तिमा उपचारको क्रममा रगत जाँच गर्दा रोशनीलाई ‘ब्लड क्यान्सर’ भएको रिर्पोट आयो ।
‘शुरुमा छोरीलाई लगातार ज्वारो आयो, गाउँमै सिटामोल किनेर खान दिए, सिटामोलले ठिक नभएपछि काभ्रेको अस्पताल लगे, त्यहापनि निको भएन अनि यहा ल्याएकी थिए’ रोशनीकी आमा सिताले लोकान्तरलाई बताइन् ,‘यहाँ ल्याएको ५ दिन पछि रगत जाँच गर्दा ब्लड क्यान्सर भएको थाहा भयो ।’
छोरीलाई ब्लड क्यान्सर भएको थाहा पाएपछि सिता छाँगाबाट खसेजस्तै भइन । घरबाट २० हजार लिएर छोरीको उपचार गराउन उनी काठमाडौं आएकी थिएन । ‘२० हजार रुपैया लिएर अस्पताल आएको दश हजार रुपैया काभ्रे मै सकियो । बचेको दश हजार लिएर काठमाडौंको बाल कान्तिमा भर्ना गरे । आफुसंग भएको पैसाले नपुगेपछि माइतिका आफन्तहरुको सहयोगमा छोरीको उपचार गराइरहेकि छु’ उनले भनिन् ।
रोशनीको उपचारमा खटिएका डा. कैलाश शाहले उनको राम्रोसंग नियमित उपचार भए क्यान्सर निको हुने बताएका छन् । सुरुको एक महिना अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले रोशनीलाई अस्पतालमै राखिएको डा. शाहले बताए । ‘अहिले हप्तामा तीन पटक रगत जाँच गराएका छौं । आवश्यक औषधिहरुपनि दिएका छौं’ डा साहले लोकान्तरसँग भने, ‘अस्पतालको निगरानीमा नियमित उपचार ग-यो भने उनको क्यान्सर ठिक हुनसक्छ ।’ डा साहका अनुसार रोशनीले २ वर्ष सम्म नियमित उपचार गराउनु पर्छ र चार महिना सम्म त अस्पताल नियमित आइरहन पर्छ ।
आशा छ निको हुने
ब्लड क्यान्सर हुने बालबालिकामा समयमा नियमित उपचार पाएमा ४२ प्रतिशत निको हुने सम्भावना भएको डा. साह बताउछन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अस्पतालले रोशनीको नियमित चेकजाच, रगत परिक्षण र शैयाको शुल्क लिएको छैन । आवश्यक औषधी भने उनिले आफन्तहरुको सहयोगमा किन्दै आएकी छन् ।
छोरी रोशनीको दुई वर्षसम्म उपचार गराउदा ठिक हुने भएपनि कसरी उपचार औषधि उपचार खर्च जुटाउने भनेर सिता अन्यौलमा परेकि छिन् । ‘अहिले सम्म त माइती तिरका आफन्तले दिएको खर्चबाट औषधी किनेर खुवाउदै छु । एक महिनामा नै डेढ लाख जति खर्च भइसकेको छ, दुई वर्षसम्म कसरी खर्च जुटाउनु । केहि सोच्नै सकेको छैन ।’ उनले आफ्नो पिडा लोकान्तरलाई सुनाइन् ।
रोशनीको उपचारको लागि ६ लाख सम्म खर्च लाग्ने डाक्टर साहले बताएका छन् । तर सितासंग न त्यति धेरै पैसा छ, न त सम्पति नै । १६ वर्षको उमेर विवाह गरेकी सिताको दुई छोरी छन् । उनी एकल महिला हुन् । आफ्नी छोरीको उपचार खर्च गर्ने स्थिति नभएको सिताल बताइन् ।
‘श्रीमान् वित्नुभएको ९ वर्ष भयो । त्यो घटनालाई विर्सीएर यी दुुईछोरीको मुख हेरेर बसेकी थिए । मेलापात गरेर जसोतसो हुर्काउदै थिए, । जेठी छोरीलाई अहिले क्यान्सर भयो’ गहभरी आसु भर्दै सीताले भनिन्, ‘लोग्ने भइदिएको भए आधार हुन्थ्यो अब छोरीको उपचार खर्च कसरी जुटाऊ ?’
श्रीमान् वित्दा सीता २४ वर्षकी थिइन भने छोरीहरु पाँच र एक बर्षका । श्रीमान्को मृत्यु पछि सासुले गरीखाने ३ रोपनी जति बारी दिएको भएपनि सो बारी आफनो नाममा नभएको सीताले बताइन् ।
‘सासुको खेतबारी दुबै छ मलाई बारी मात्रै दिएका छन् । त्यहि बारी पनि मेरो नाममा छैन । अर्कै संग जान्छे भनेर नामसारी गर्दिएनन् ।’ सिताले दुखेसो पोखिन्, ‘सासुले म बाचुन्जेर नामसारी गर्दिन्न भन्नुहुन्छ । आफ्नो नाममा भैदिएको भए । त्यहि बारी धितो राखेर भएपनि छोरीको उपचार गराउथे. ।’
छोरी रोशनीलाई क्यान्सर भएपछि अस्पतालमै एक महिना देखि रहकी सितालाइ अब २ वर्षसम्म छोरीको उपचार खर्च कसरी जुटाउने र आफु नै पनि कसरी बाच्ने भनेर समस्यामा परेकी छन् । छोरीको उपचारमा कसैले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा छ सितालाई ।
निको भएपछि स्कूल जान्छु
कक्षा नौ मा पढ्दै गरेकि रोशनी अहिले अस्पतालमा उपचारत छिन् । उपचार भएपछि स्कूल जाने चाहना छ रोशनीको । ‘विरामी भएदेखि स्कूल जान पाएको छैन । स्कूल जान मन छ । डाक्टरले निको हुन्छ भन्नुभएको छ । ठिक भएपछि स्कूल जान्छु’ रोशनीले लोकान्तरलाई भनिन् ।
रोशनीलाई बचाउन ९८१३८०८८७८नम्बरमा फोन गरेर सहयोग गर्न आमा सीताले अपील गरेकी छिन् ।
असोज २, २०७४ मा प्रकाशित